दोस्रो बिहे गर्ने तयारीमा श्रि कृष्ण श्रेष्ठकि श्रीमती स्वेता सम्झिदै श्री कृष्णलाइ
उनका अन्तरवार्ताहरुमा श्रीमान एवं स्वर्गीय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको सपना पुरा गर्न कान्छी निर्माण गरेको बताउँने स्वेताको विभिन्न अन्तरवार्तामा सुमन संग मनको कुरा कार्यक्रम प्रसारण भएपछि पुन एकपटक स्वेताको दोस्रो बिवाहलाई लिएर चर्चा सुरु हुन थालेको छ । कार्यक्रममा उनले श्रीमान होईन मलाई सबैको साहाराको खाँचो पर्छ भन्ने जवाफले उनका प्रशंसकसामु यो प्रश्न फेरी उठाईदिएको छ के स्वेताले फेरी बिवाह गर्लिन ???
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायिका , समाजसेवी , सफल व्यवसायी र निर्मात्रीको परिचय बनाएकी स्वेता खड्का लामो समय पछि नेपाली दर्शकमाझ कान्छी लिएर आउँदैछिन् । फागुन ४ गते रिलिज हुन लागिरहेको कान्छीको प्रमोसनमा व्यस्त रहेकी स्वेता यतिबेला विभिन्न अन्तरवार्तामा देखिईरहेकीछिन् ।
उनले विभिन्न अन्तरवार्तामा दोस्रो बिवाहको प्रसंग उठ्दा बिवाह गर्ने कुनै सोच भएको भान दर्शकले सजिलै बुझन सक्छन् । तर उनी आफै भन्ने गरेकीछिन् पछिको कुरा के हुन्छ थाहा छैन । त्यसो त परिवार र आफन्तहरुले उनको बिवाहको कुरा उठाईरहँदा यसलाई सामान्यरुपमा लिएको उनले बताएकीछिन्
उता उनका धेरै प्रशंसक र शुभेच्क्षुकहरु अब स्वेताले बिवाह गर्नुे पर्ने राय दिन्छन् । धेरैले उनलाई अब बितेर गएको मान्छेको लागि आफनो जिन्दगी एक्लै नबिताउन अनुरोध गर्छन् । तर के स्वेताले दोस्रो बिवाहको लागि सोचेकी होलिन् ??? यदि उनले बिवाह गरिन भने पनि आफनो पहिलो श्रीमान श्रीकृष्णको बारेमा अहिलेको जसरी खुल्न पाउँलिन् ????
अनि श्रीकृष्णकै नाममा खोलेको स्वेता श्री फाउण्डेसनको अस्तित्व रहला ??? यसखाले शंका उपशंका उनका प्रशंसकमाझ पैदा भईरहेको छ । तर जे जस्तो भएपनि सम्भवत उनले दोस्रो बिवाह गरिन भनेपनि उनका शुभेच्क्षुक र दर्शकहरुको साथ , माया र आर्शिवाद भने उनीसंग सधै रहनेछ ।Merofilmy बाट